Cement Kuwedzera Fekitori - China Cement Kuwedzera Vagadziri, Vatengesi
JS-104 Remubatanidzwa polycarboxy ...
Polycarboxylate Eteri Monom ...
GQ-KG (L) / 01/02 Cable Grouting Mumiriri
GQ-KG t inoumbwa neyekuwedzera michina yekuwedzera zvinhu, yakakwira kuita mvura yekudzora, dzakasiyana siyana zvisina kujairika uye zvakasikwa polymer zvinhu pamwe neIP, 42.5 simenti. Yakanaka fluidity, yakatsiga slurry, yakanaka yekuzadza degree, hapana shrinkage, kuwedzera kushoma, hapana zvinokuvadza zvinhu kune iyo yekusimbisa. Ndiyo gro
GQ Defoamer chiremara chakatsaurirwa polycarboxylate superplasticizer. GQ defoamer inoshanda nekukurumidza, yakadzikama uye inogona kudzivirira bubble kuburitsa kwenguva yakareba.
GQ-SN Flash Seeting Admixture - Liquid (Alkali-yemahara)
GQ-SN imhando yemvura nyika kongiri yekuwedzera. Chinhu chikuru cheGQ-SN isodium aluminate. Iko kusanganisa kunoshandiswa kunyanya kwekrete yakasaswa; inogona kumhanyisa kuomesa maitiro ekongiri zvakanaka, uye ine zvakanakira yakaderera guruva density, yakadzikama kusimba, yakakwira yakareba-yakareba stre
GQ-210 Ekutanga Simba Remagetsi Agent
Ichi chigadzirwa chakagadzirwa nemubatanidzwa wezvakasiyana-siyana zvekutanga simba zvikamu. Inonyanya kushandiswa mumhando dzese dzekongiri mapurojekiti ane simba rekutanga zvinodiwa uye mune yakaderera-tembiricha mwaka. Iyo mhando yechigadzirwa inosvika GB8076 yakajairwa.
Cellulose Ether HPMC yekupurasita / Concrete / Grout seMvura-Yekuchengetedza Mumiriri
HPMC ipfupi neHydroxypropyl Methyl Cellulose, haina hwema, isinganetsi, isina chepfu off-chena hupfu. Izvo zvakare Isiri-ionic cellulose ether. Inoshandiswa seyakawedzera, inosimbisa, yekuchengetedza mvura mumiririri, emulsifier. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri senge yekuvaka zvinhu, pendi & kupfeka, cer